ရိုးခက် ● စစ်ဘေးသင့် ကလေးငယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
အလေးအပင်တွေ မ, ရတဲ့အခါ
မ, လို့မရတာတော့ သေချာတယ်
သစ်ဂွ (ခွ) ချိုင်းထောက်ကလေး
ခု ကျွန်တော့်အရပ်ထက် တိုနေတယ်
ငြိမ်းချမ်းရေးကို တောင်းတလို့ ။ ။
၇. ၁၀. ၂၀၁၆
ရိုးခက် ● လှိုင်း (0)
ရိုးခက် ● မနက်ဖြန် ကျောင်းအဖွင့် သားကျောင်းတက်ချင်တယ် မေမေ (0)
ရိုးခက် ● ထင်မထားခဲ့တဲ့အရာတွေ (0)
ရိုးခက် ● စစ်မိုးကရေစီ နိုင်ငံတော် (0)
ရိုးခက် – ၅၉ (စ) (0)